IIFILIMU EZILI-16 EZIGQWESILEYO ZECLINT EASTWOOD ZEXESHA LONKE - UKUZONWABISA
Iifilimu ezili-16 ezigqwesileyo zeClint Eastwood zexesha lonke
UClint Eastwood ubekwiliso loluntu ukusukela kwiminyaka yoo-1950 xa wayeqala ukubamba inkwenkwezi njengoRowdy Yates kumdlalo weqonga kumabonakude waseNtshona Rawhide . Ukusuka apho waba ligama lasekhaya njengenkwenkwezi yaseNtshona ngaphambi kokushiya uhlobo ngasemva kwaye waba yintshatsheli yaseHollywood njengomdlali weqonga kunye nomlawuli. Nditsho nakwiminyaka yobudala engama-91, u-Eastwood usayenza, kunye nenqaku lakhe elilandelayo lomlawuli (elungiselelwe ukuqala oku kuwa) iNeo-Western ebizwa ngokuba Khala uMacho .
Ilifa lika-Eastwood libanzi. Iindima zakhe ze-iconic ezinjengeNdoda engenagama, uHarry Callahan, uWalt Kowalski, kunye noWill Munny bazakudlula ixesha elide, kwaye ixesha lakhe emva kwesihlalo somlawuli liya kuhlala lide liphefumlelwe kuyo yonke imbali yefilimu. Ngelixa ngelishwa lethu singenakho ukudwelisa yonke i-Eastwood flick phaya, yazi ukuba ezi zezinye zezona zinto zibaluleke kakhulu ezixabisa ixesha lakho.
1. Abangaxoleli (1992)
Akuxolelwa lelinye lawona maxesha amakhulu asentshona (ungazijonga izinto esizithandayo Apha ). Iinkwenkwezi zase-Eastwood kwaye ikhokela kolu thumo lokugqibela emsebenzini wakhe kuhlobo lwaseNtshona. U-Eastwood udlala indawo kaWill Munny, owayekade ephethe umpu kunye nomhlolo wanyanzelwa ukuba akhulise abantwana bakhe bobabini ngelixa ejongene nobumnyama bangaphambili.
Lo mboniso bhanya-bhanya ubonisa ezinye zeyona midlalo intle kakhulu evela kuGene Hackman ( Utshaba lukaRhulumente ), UMorgan Freeman ( Ukuhlawulelwa kweShawshank ), URichard Harris ( UHarry Potter kunye neLitye loMlumbi ), kunye no-Eastwood ngokwakhe, ofaka iintliziyo kunye nemiphefumlo yabo kwisakhelo ngasinye. Ngumsebenzi wabo kwifilimu ebeka ecaleni kungekuphela kwayo yonke i-Eastwood yabanye abaseNtshona kodwa nayo yonke ifilimu yakhe.
Kude kube namhla, Akuxolelwa ayibonakalisi kuphela eyona ntsebenzo inkulu ye-Eastwood kodwa owona msebenzi wakhe ubalaseleyo emva kwekhamera. Umsebenzi wobugcisa we-cinematic.
2.Amdaka uHarry (1971)
Ngokuqinisekileyo indima edume kakhulu e-Eastwood, Ungcolile uHarry Iimpawu zomhloli waseSan Francisco wokubulala uHarry Callahan njengoko elandela umbulali obulalayo iScorpio (oxhomekeke ngokukhululekileyo kwiZodiac Killer) esebenzisa iindlela ezingcolileyo nezingaqhelekanga. Ifilimu iphefumlele uthotho lwemifanekiso engcolileyo kaHarry kwaye inoxanduva lomgca wokungafi, Ngaba ndiziva ndinethamsanqa? Ewe, yenza i-punk!
U-Eastwood uza kuthi kamva ahambise ifilimu yesine, Impembelelo yequbuliso , kuthotho lwemifanekiso emihlanu, kodwa ifilimu yoqobo kulapho imilingo yaqala khona. Indawo yokuphanga ebhankini iyodwa (eyenzeka kwisenzo sokuqala) kufanelekile ukubukela.
Isimo sengqondo sokungakhathali sikaHarry kunye nobunzima kwimbonakalo yolwaphulo-mthetho ziya kukonwabisa kwaye zikoyikise de ifilimu isike kumnyama. Ungcolile uHarry yenye yezona zinto zivuyisayo zamapolisa phaya, ke ukuba uyayithanda into enomdla kuyo, le yeyakho.
3. I-Trilogy yeeDola (1964, 1965, & 1966)
Uthotho lwefilimu apho Indoda engenagama ivela khona, iinkwenkwezi zase-Eastwood kuzo zontathu i-Spaghetti Westerns ezidumileyo zikaSergio Leone: Ukuqina kweedola , Zimbalwa iidola , kunye nesihloko ngokufanelekileyo Okulungileyo, okubi nokubi , ezenza into ngokudibeneyo yaziwa njenge Iidola zetrilogy .
Ngelixa ezimbini zokuqala zingakholeleki, ifilimu yesithathu, ngakumbi, ikhanya njengenye yezona ndawo zibalaseleyo zaseNtshona ngalo lonke ixesha. Inika enye yemipu yexesha lonke eyakhe yenziwa kwi-celluloid kwaye yaziwa ngokunceda ukwenza iStandoff yaseMexico ibe sisenzo sebhanyabhanya.
Indoda yase-Eastwood engenagama isenokuba yeyona mpu mikhulu kubo bonke. Iidola zetrilogy usenokungaziva njengoJohn Wayne Western, kodwa, njengeNdoda engenalo igama uqobo, iyawenza umsebenzi.
4. IGran Torino (2008)
izimvo zegumbi lokuhlala zangoku kuhlahlo-lwabiwo mali
Omnye weyona midlalo mihle ye-Eastwood, kwaye, ukuba Akuxolelwa khange balunge kakuhle, iphakathi kweefilimu ezilawulwa kakuhle. Umakhulu uTorino imalunga nomlwelwe waseKoren owayesandula ukuba ngumhlolokazi, uWalt Kowalski, oba ngumhlobo wabafana baseHmong baseMelika, uThao (Bee Vang) noSue (Ahney Her) abahlala kufutshane.
Ngelixa umboniso bhanyabhanya uvuse impikiswano ngenxa yencoko yawo yobuhlanga (nangona kunjalo, olo luhlobo lwento njengoko uKowalski efunda ukoyisa ucalucalulo lobuhlanga), isadunyiswa namhlanje ngemixholo yobuhlobo, ukoyisa ubuhlanga, kunye nokuba ngowokuqala eMelika. Ukuveliswa kwefilim ukuba kube nenkunkuma enkulu yeHmong.Ngelixa oku kunokuba ngathi yifilimu utata wakho afuna ubukele, Umakhulu uTorino yinto yobugcisa yanamhlanje exabisa ixesha kunye nengqwalaselo yakho.
5. Dlala iMisty For Me (1971)
Isikhokelo sokuqala se-Eastwood, Dlala iMisty kum yimincili yengqondo edla ngokulityalwa xa umntu ekhumbula ifilimu yomenzi wefilimu. Lo mboniso bhanyabhanya ubonakalisa i-Eastwood malunga noJessica Walter ongasekhoyo ( Uphuhliso olubanjiweyo ) Njengerediyo yediski ye-jockey elandelwa ngumlandeli ongathandekiyo.
Ngelixa sinokuthi sisetyenziswe kuWalter njengomphathi weemvakalelo kumabonwakude, indima yakhe kwi Dlala iMisty kum izisa kwinqanaba elitsha ngokupheleleyo. Ukusebenza kwakhe kuyabonakala kwaye kwamenza wanyulwa iGolden Globe ngaloo nyaka. Dlala iMisty kum yenye yeempawu ezifihliweyo zase-Eastwood ezifanele abaphulaphuli abakhulu.
Bona ngakumbi malunga - Iifilimu zikaKeanu Reeves zibekwe kwiWorst to Best
6. I-American Sniper (2014)
Ifilimu yokuqala kolu luhlu ukuba ingamlingisi uClint Eastwood nakwesiphi na isikhundla (nangona ebonakala kwi-cameo njenge-Churchgoer), American Sniper iinkwenkwezi uBradley Cooper ( Kuzalwa inkwenkwezi ) njengesigebenga sokwenyani sase-U.S. uChris Kyle, owaba ngoyena mntu ubulala abantu abangaphezulu kwama-255 kwimfazwe yase-Iraq.
American Sniper ngomnye umsebenzi ogqwesileyo wase-Eastwood njengomlawuli wefilimu njengoko ebonisa ubunzima, ububi, kunye nenkohlakalo yemfazwe yanamhlanje. Ukuba ucinga ukuba imfazwe ifana Umxeba womsebenzi , ufile ngokungalunganga, kwaye le filimu iya kungqina oko. Ngelixa oku kunokuba kuninzi abanye ukuba babukele, yifilimu ebalulekileyo ejongene nemicimbi yezempilo yengqondo kunye nemicimbi yegqala. American Sniper yenye yeefilimu awaphuma kuzo lo mbhali ethe cwaka, kungekho nelinye ilungu labaphulaphuli elathi lathetha igama.
7. Umphuli-mthetho uJosey Wales (1976)
Beka zombini ngexesha nasemva kweMfazwe yaseMelika, Umgwebi uJosey Wales iinkwenkwezi zase-Eastwood njengoko uqikelele, uJosey Wales, umlimi waseMissouri ofuna ukuziphindezela kwabo babulala usapho lwakhe, kuphela ukuba alandelwe ngamajoni eManyano. Imalunga nento onokuyilindela kwi-Eastwood yaseNtshona.
Emuva ngo-2011, u-Eastwood waya kwirekhodi esithi UJosey Wales yifilimu echasene nemfazwe, isithi wonke umntu uyakhathala ngayo, kodwa ayipheli. Oku kubonakala ngokucacileyo kuyo yonke ifilimu nkqu naxa iphela iMfazwe yamakhaya, imfazwe kaJosey ayenzi njalo.
Nokuba ukufuna kwakhe kugqityiwe usaqhuba. Imfazwe yakhe ayikaze iphele ngokwenyani.Kude kube namhla, Umgwebi uJosey Wales yenye yeefilimu ezithandwa kakhulu e-Eastwood ngabalandeli nabagxeki ngokufanayo.
8. Isigidi seDola Baby (2004)
Idrama yezemidlalo eyaziwayo e-Eastwood ayisiyiyo eyentliziyo etyhafileyo. Iinkwenkwezi zase-Eastwood njengoFrankie Dunn, umqeqeshi webhokisi wamanqindi, kunye noHilary Swank ( I-Karate Kid elandelayo ) njengoMaggie, umlo wamanqindi onqwenelayo, kunye noMorgan Freeman njengomsizi kaDunn (kunye nombalisi wefilimu). Le bhanyabhanya ekugqibeleni imalunga nosapho, kwaye siyayithanda loo nto.
Ubudlelwane bukaFrankie noMaggie lilitye lembombo kule filimu. Ulwalamano olubi lukaMaggie kunye nosapho lwakhe juxtaposes noFrankie, ebavumela ukuba benze ulwalamano losapho lwabo. Isigidi seDola Baby Yintsomi eyothusayo malunga nokulandela amaphupha akho kunye nokusebenza njengesihogo ukubabamba.
9. Amathafa aPhakamileyo (Drifter) (1973)
Ukuchaphazeleka ngumsebenzi wabasebenzi bakhe bexesha elide kunye nabacebisi (abo wazinikezela ngokwenene Akuxolelwa kuSergio Leone ( Iidola zetrilogy kunye noDon Siegel ( Ungcolile uHarry ), Amathafa aPhakamileyo aqhubela kude NgowaseNtshona ekhokelwa ngu (kunye no-Starring) uClint Eastwood malunga nomphambukeli ongaqondakaliyo owenza ubulungisa kwidolophu enemigodi yemigodi eyonakeleyo.
Icebo elilula ecaleni, abanye, njenge icon yaseNtshona uJohn Wayne ( Abaphandi ) khange athathe indlela ye-iconwood ye-Eastwood, ade aye kumbhalela ileta echaza ukuba ayisiyiyo le nto yaseNtshona.UWayne ugxeka ecaleni, ifilimu iyakwazi ukugcina abantu bonwabile kwaye bonwabile unanamhla. Amathafa aPhakamileyo aqhubela kude Ngaba ibali lesiporho elixhonyiweyo ubungazi nokuba ulinqwenela, kwaye yile nto siyithandayo ngalo.
Ubaleka kwiAlcatraz (1979)
Intsebenziswano yokugqibela phakathi kwe-Eastwood kunye nomlawuli uDon Siegel, Baleka kwiAlcatraz Yifilimu yesenzo sentolongo yiyo kanye le nto isihloko sicebisa ngayo njengoko ibonisa umdlalo wembali yowe-1962 yokubaleka kwesi siqithi siphezulu.
zokuzonwabisa zamadoda kwiminyaka engama-30
U-Eastwood udlala uFrank Morris, umgwebi wobomi bokwenyani ovela kwizidubedube ezikhethekileyo ze-IQ. osebenza nzima ukuze akhulule iimbophelelo zakhe. Ngelixa indawo yokugqibela ichaza ukuba inxenye yokuphunyuka inokuba ibe yimpumelelo, sele ixoxiwe ukuba ukhona umntu ophumeleleyo okanye hayi. Baleka kwiAlcatraz isenokungabi yifilimu eqhelekileyo kaClint Eastwood, kodwa leyo yinxalenye yomtsalane wayo.
Bona ngakumbi malunga - Iifilimu zikaJoaquin Phoenix zibekwe kwiWorst to Best
11. Iiflegi zoobawo bethu / iileta ezivela kubo Iwo Jima (2006)
Olu phawu luphinda-phinda kukujonga okungafaniyo nomsebenzi wase-Eastwood njengomlawuli. Iiflegi zoobawo bethu Iminyaka emihlanu yaselwandle kunye nomnye umntu owayebandakanyeke ekuphakamiseni iflegi yaseMelika ku-Iwo Jima kunye nendlela eyabuchaphazela ngayo ubomi babo. Yifilimu yokuthand 'izwe ngokwenene, efana American Sniper , Ungabonisa ububi bemfazwe.
Kwicala elisezantsi, Iileta ezivela ku-Iwo Jima , eyafotwa ubuyela umva nayo Iiflegi zoobawo bethu njengesiqwenga somlingane, phantse yonke isiJapan njengoko ilandela iMfazwe yesibini yeHlabathi efanayo ukusuka kwindawo yokujonga yaseJapan. Iiflegi zoobawo bethu kwaye Iileta ezivela ku-Iwo Jima inokuba zezona bhanyabhanya zibalulekileyo zase-Eastwood ukuza kuthi ga ngoku, zibonisa iindlela ezimbini kwiziganeko ezifanayo, zisikhumbuza ukuba wonke umntu unento abakholelwa ukuba kufanelekile ukuyilwela.
12. IPale Rider (1981)
Ukudibanisa iitattoo zosapho kubafana
Ukubuyiswa okuthambileyo kweklasikhi yaseNtshona Shane intsingiselo yegama , Rider okhanyayo yenye yeNtshona ye-Eastwood enomdla kakhulu njengoko ithatha ifomula yaseNtshona yakudala kwaye yongeza umhlaziyi ojikelezayo kuyo. U-Eastwood ukwaneenkwenkwezi njengoMshumayeli (njengoko enxibe ikhola yokubhala), olandelwa emva komkhweli okhanyayo kwincwadi yeZityhilelo, ihashe lokufa.
Ngokungafaniyo Shane intsingiselo yegama , Eastwood ’ Rider okhanyayo akoyiki kwiminqweno yoMshumayeli, kwaye akoyiki kubundlobongela njengoko esebenza ukukhusela idolophu esentabeni ekhephu kunye nosapho athe waluthanda. Kakhulu kangangokuba unomama kunye nentombi elwela ukuba ayiqwalasele (into engaqhelekanga kwaye ingonwabisi). Rider okhanyayo wenza umsebenzi wohlaziyo lwaseNtshona ngokungaziqondi i-West yaseMelika.
13. IGauntlet (yowe-1977)
Omnye umfanekiso ojolise ngqo e-Eastwood owenza iinkwenkwezi kwi-icon yaseHollywood njengepolisa eliphantsi nelithandana noonongogo (uSondra Locke, Umgwebi uJosey Wales Wabelwe ukuba akhaphe ukusuka eLas Vegas ukuya ePhoenix ukuze akwazi ukunikela ubungqina ngokuchasene nehlokondiba.
Ngelixa ipowusta inokubonakala ngathi ithembisa i-post-apocalyptic thriller, IGauntlet ngumboniso bhanyabhanya osemazantsi obonisa izinto oqhele ukuzenza ngesantya esiphezulu. Nangona, kukho ukulandelelana kwengozi yehelikopta epholile.Ukuba uyayithanda into ye-gangster kwaye ufuna ukubona abanye abantu besilwa nehlokondiba lokuqala, IGauntlet yiClint Eastwood Flick yakho.
14. UMlambo iMystic (2003)
Nangona uClint Eastwood engabonakali kwikhamera kule, UMlambo uMystic yenye yeefilimu zakhe ezinomdla emva kwekhamera. Ngaphandle kwento yokuba yeyona bhanyabhanya yokuqala wafumana ikhredithi yokuqamba, ikwakuqala ukuba ifilimu iphumelele ugqirha oGqwesileyo kunye neGcisa eliXhasa ngokuBalaseleyo kwii-Oscars ukusukela UBen-Hur kwiminyaka yoo-1950.
UMlambo uMystic Libali lamadoda amathathu awayengabahlobo bobuntwana nanjengoko ubomi babo busonakala emva kokuba omnye wabo ehlelwe yintlekele yosapho. Ukuba loo nto ivakala ingacacanga kwaye ikrokrela, kufanelekile, kuba ukuba sithetha enye into iyakuyonakalisa yonke loo nto.Ukuba awuqinisekanga malunga UMlambo uMystic , makube ngumlingisi kaSean Penn ( Umdlalo ), UTim Robbins ( Ukuhlawulelwa kweShawshank ), Kunye noKevin Bacon ( Ezilandelayo ) ndikuqinisekise.
15. Kumgca woMlilo (1993)
UClint Eastwood isenokungabi ligama lokuqala ocinga ngalo xa usiva inyathelo lezopolitiko, kodwa mhlawumbi kufanele ukuba emva kokubona Kumgca woMlilo . Iinkwenkwezi zase-Eastwood njengoMmeli weNkonzo yaMfihlo uFrank Horrigan njengoko ezama ukuthatha indoda ehamba ngegama elithi Booth (John Malkovich, Yeempuku naMadoda phambi kokuba abulale uMongameli.
Indibaniselwano yezopolitiko, ukurhanela, kunye nokulandelelana kwamanyathelo kuya kukugcina ubandakanyeka kwaye wonwabise ngokupheleleyo kwifilimu. U-Eastwood uhlangula, ngoncedo lukaRene Russo ( Isixhobo esiLethal 3 ) odlala iqabane lakhe leNkonzo eNfihlakeleyo, njengoko esilwa ukugcina uMongameli engekho kumlilo. Kumgca woMlilo ayiyona bhanyabhanya ithandwayo kaClint Eastwood, kodwa ihlala iyenye yeendima zakhe ezingakhathalelwanga.
Ukongezwa kutshanje kwifilimu ye-Eastwood, bobabini njengomdlali weqonga kunye nomlawuli, UMyuzi isekwe kwibali lobomi bokwenyani apho uLeo Sharp (obizwa ngokuba ngu-Earl Stone kwifilimu), owayesakuba ngugqirha wezilwanyana weWWII, waba sisixhobo seziyobisi seSinaloa Drug Cartel. I-Eastwood, kwi-90 yayo, inika eyona midlalo inomdla kakhulu kwikhondo lakhe, kwaye siyayithanda.
Ngomntu obulalayo kubandakanya uBradley Cooper, uLaurence Fishburn ( UMlambo uMystic UMichael Pena ( Isigidi seDola Baby ), UDiane Wiest ( Ubomi Kwiziqwenga ), kunye noAndy Garcia ( Elishumi elinanye Ocean ), UMyuzi kukujongwa okuhle ebomini bomntu wosapho ongenandawo yokuya kodwa ezantsi, kwaye kufanelekile ukukhwela. UMyuzi ibizwa ngokuba yifilimu ebukekayo nenomtsalane, kwaye oko kufanele ukuba kwanele ukonyusa umdla wakho.
Bona ngakumbi malunga - Iifilimu ezili-15 eziBalaseleyo zeXesha lonke
unganxiba njani njengendoda ngoo-1950
Izimvo eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nethani
Umdwebo omnyama nomhlophe we-lily
Iinwele ezinde ezilungileyo kakhulu emadodeni